Uyenza njani imo ye-Incognito kwiYouTube kwi-Android | I-Androidsis
Uyenza njani imowudi ye-Incognito kwiYouTube yeAroid
Imowudi ye-Incognito iyeyona nto iphambili kubasebenzisi abaninzi kule minyaka idlulileyo, nangona kunjalo ayenzi yonke into ethembisa yona Kuba ihlala ishiya umkhondo kwikhompyuter apho isetyenziswa khona, ngaphandle kwento abayithethayo abaphuhlisi besikhangeli, hayi mna, kodwa iingcali zezokhuseleko
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye, uye wanyanzelwa ukuba ushiye i-smartphone okanye ithebhulethi kunyana wakho, umtshana okanye umntwana wakho omncinci okusingqongileyo. Ukuba ixesha olishiya liphezulu kakhulu, kunokwenzeka ukuba ubone inani elikhulu leevidiyo, iividiyo ezitsala ezinye iividiyo ezicetyiswayo, ngalo lonke ixesha uvula usetyenziso, uya kuba nalo iingcebiso zevidiyo ongazibonanga ngokobuqu, awufuni kubona.
Kwezi ntlobo zezihlandlo, eyona nto sinokuyenza yile Sebenzisa imo ye-incognito esiyifumana kuYouTube, into ebhengezwe kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye ngoku iyafumaneka. Ukuba senza lo msebenzi, akuyi kubakho mkhondo kwisiphelo sethu malunga nokhangelo esikwazileyo ukuluqhuba okanye iividiyo esizibonileyo, ke xa uzenza zingasebenzi, iingcebiso ziya kuqhubeka njengesiqhelo kukhetho lwethu kwaye ayingabo abo basebenzise i-smartphone yethu.
Sebenzisa imowudi ye-incognito kwiYouTube yeAroid
Okokuqala, kufuneka sivule usetyenziso kwisiphelo sethu kwaye siqiniseke ukuba sinakho uhlaziyo lwamva nje olukhoyo.
Emva koko, cofa kwi-avatar yethu, ebekwe kwikona ephezulu ngasekunene.
Okulandelayo, ukhetho olwahlukileyo olwenziwa yi-YouTube kuthi ukuze siqwalasele usetyenziso luya kuboniswa. Ukwenza imowudi ye-incognito isebenze, kufuneka nje ucofe kusebenze imowudi ye-incognito.
Ngelo xesha, isicelo sisazisa ukuba iya kucima wonke umsebenzi esiwenzileyo okoko le modeli iyasebenza nje ukuba siyayikhupha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Uyenza njani imowudi ye-Incognito kwiYouTube yeAroid
Olu luguqulelo olutsha lwe-Samsung Health: ujongano olutsha kwaye ngoku ulinganisa inqanaba loxinzelelo
UXiaomi utyhila emfanekisweni iMi MIX 3 ngoqhagamshelo lwe5G kumothuko lomntu wonke